Iresiphi ye-Steak yeCauliflower eyoyiweyo elula - Iiresiphi
Iresiphi ye-Steak yeCauliflower eyoyiweyo elula
I-Cauliflower Steak eyosiweyo sisidlo sangokuhlwa esisempilweni, esikhawulezayo nesilula esisetafileni ngophanyazo. I-Cauliflower steaks inqunyulwe kakhulu, ixutywe ngomxube weoli yeoli, kwaye yosiwe de ibe yithenda.
Thatha ikhefu elincinci kwisiqhelo inkukhu eyojiweyo okanye ipisi senyaman yehagu ngesiteki secauliflower esilula nesinencasa...awuyi kukholelwa ukuba kulula kangakanani na!
Makhe sifumane i-Grilling
Imifuno eyosiweyo zinencasa kwaye zinencasa kodwa ndiye ndamadolw' anzima ukuzama ukoja inyama yecauliflower kuba ikholifulawa ithande ukuba bland kancinci….ngokoluvo lwam. Kodwa naphi na apho ndijika khona, ndandihlala ndibona i-cauliflower steaks, ngoko ndacinga ukuba ndingayinika isivunguvungu. Kwaye yayiyimbono yeFANTASTIC leyo.
Ukuba awukabi nayo iCauliflower Steak okwangoku, ukwindlela yokwenyani. Nokuba awungomlandeli wecauliflower, ndingakuqinisekisa ukuba UYA KUYITHANDA le recipe! Usapho lwam oluthiyayo imifuno yasiqwenga sonke isitya ngemizuzu nje embalwa. Ngokukhawuleza, enyanisweni, kwafuneka ndenze enye ibhetshi.
Yayingeyonto inkulu kuba i-Cauliflower Steak eyosiweyo ikhawuleza ngokuphambanayo kwaye kulula ukuyenza!
Uzenza njani iiCauliflower Steaks
I-Cauliflower Steaks engcono kakhulu eGrithiweyo ilungile ngaphantsi kwemizuzu engama-30, kubandakanywa nexesha elithathayo ukusika i-steaks. Ukwenza i-crispy cauliflower steaks ngaphakathi (okanye ukuba awunayo igrill), lula yosiwe cauliflower steaks zezona zihambayo ngeenyanga zasebusika. Kulula ngokulinganayo kwaye kanye njengokuba likhoboka!
Indlela yokusika nokulungiselela:
Sika i-cauliflower steaks NGOKUQALA usike intloko yecauliflower ibe sisiqingatha ezantsi embindini. Musa ukususa isiqu.
Sika isiqingatha ngasinye kwi-1 1/2 - 2 intshi ye-steaks ebanzi. Kuya kufuneka ukwazi ukufumana i-steaks ezimbini kwisiqingatha ngasinye ngokuxhomekeke kubungakanani bekholifulawa yakho. Ukuba usika ama-steaks amancinci, iiflorets aziyi kubambana.
Kwisitya esincinci, xuba izithako ze-cauliflower steak marinade. (Ukuba awunawo umsi omanzi okanye awukwazi ukuwufumana evenkileni, ungawutsiba.)
Ukusebenzisa ibrashi ye-pastry, gcoba macala omabini e-cauliflower steaks kunye ne-marinade yeoli yeoli ekhethiweyo.
Beka i-cauliflower steaks kwi-grill kwaye upheke ngokushisa okuphakathi kwemizuzu emi-4-5.
Ngononophelo flip i-cauliflower steaks phezu kwe-spatula kwaye uqhubeke upheka i-grill imizuzu engama-3-4 eyongezelelweyo okanye kude kube yithenda.
Khonza ngokukhawuleza ufefe ngeparsley, ukuba unqwenela. Ukuba ungathanda i-sauce, sebenzisa ngokupholileyo, okutsha I-Sauce ye-Tzatziki , into ebabayo I-Sauce yeNyathi okanye ithontsi ye I-Pesto sauce kuba ukukhanya kwehlobo incasa!
Yintoni omele Uyikhonze ngeCauliflower Steaks
I-Asparagus eyosiweyo elula – ilungile kwimizuzu eyi-10!
Isaladi yeeAvocado zeTomato – ilula kwaye iyahlaziya
Isaladi ye-spaghetti - Endiythanda kakhulu!
Iimbotyi eziMnyama kunye neSaladi yombona – fresh, crunchy, tangy
Ezona Iimbotyi eziBhakiweyo -Isitya esikhulu esisecaleni esizaliswe yincasa!
4.84ukusuka6iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselela10 imizuzu Ixesha Lokupheka10 imizuzu Ixesha elipheleleyoAmashumi amabini imizuzu Iinkonzo4 iinkonzo UmbhaliKellie Hemmerly Iresiphi eyojiweyo yeCauliflower Steak esele ilungile ngaphantsi kwemizuzu engama-30.
▢Mbini iintloko icauliflower amagqabi asusiwe
▢¼ indebe i-oyile ye-olivu
▢Nye icephe umgubo wegalikhi
▢Nye icephe ndatshaya ipaprika
▢½ icephe umgubo wetswele
▢½ icephe umsi wolwelo
▢¼ icephe ityuwa
▢¼ icephe ipelepele
▢¼ indebe iparsley entsha inqunqwe
Sika ikholifulawa ibe yisiqingatha ukusuka phezulu ukuya ezantsi ukusika kwisiqu. (Musa ukususa isiqu.)
Sika isiqingatha secauliflower ngasinye sibe yi-1 ½ - 2 intshi yezilayi. Kufuneka ube necauliflower steaks ezi-4 ukusuka kwintloko enye yecauliflower ngokuxhomekeke kubukhulu becauliflower yakho.
Lungiselela i-cauliflower kwiphepha lokubhaka okanye i-tray. Bekela ecaleni.
Kwisitya esincinci, xuba ioli yeoli, i-paprika, umgubo we-anyanisi, umsi omanzi, ityuwa kunye nepepper.
Gcoba macala omabini e-cauliflower steaks kunye neoli ekhethiweyo usebenzisa ibrashi ye-pastry.
Beka i-cauliflower steaks kwi-grill kwaye upheke imizuzu emi-4-5.
Ngononophelo flip i-cauliflower steaks phezu kwe-spatula kwaye uqhubeke upheka imizuzu emi-3-4 okanye kude kube yithenda.
Fafaza nge-parsley eqoshiwe, ukuba unqwenela, kwaye usebenze ngokukhawuleza.
Iinyama zeCauliflower zinokusikwa ukuya kutsho kwiiyure ezisi-8 phambi kwexesha. Eyona nto ingcono ukuba yonwabele kwangolo suku ziyosiwe.
Iikhalori:198,Iicarbohydrates:16g,Iprotheyini:6g,Amafutha:14g,Amafutha aGqithisiweyo:Mbinig,Isodium:236mg,Potassium:901mg,Ifayibha:6g,Iswekile:6g,IVithamin A:560IU,Ivithamin C:143.6mg,Ikhalsiyam:68mg,Iayini:1.6mg
IkhosiIsidlo sakusihlwa, isidlo sasemini
Izinto Izibonelelo Abapheki Umlambo Boat Cruise Abantwana Imiboniso Yeslides Imisebenzi Yabantwana
igama into anokuyenza umfundi ukupasa uvavanyo
ukufaka iiplanga zokwenene eluphahleni
kwenzeka ntoni xa intombazana ilahlekelwa bubuntombi bayo
ungazifumana ii-tatoo ngelixa uncancisa
ziindlovu ngethamsanqa okanye ngelishwa